पर्वत जिल्लाका ७ स्थानीय तह र ६१ वडाको निर्वाचन परिणाम : कसले गुमायो, कसले बढायो ? | Ratopati
पर्वत जिल्लाका ७ स्थानीय तह र ६१ वडाको निर्वाचन परिणाम : कसले गुमायो, कसले बढायो ?
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ६, २०७९ chat_bubble_outline0
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा पर्वत जिल्लामा एमालेले ३७ वटा वडा जितेको थियो । अहिले ४ वटा वडा एमालेले गुमाएको छ । २०७४ स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्वतमा काँग्रेसले २० वडा जितेको थियो भने हाल बढाएर २४ पुर्‍याएको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादीले १ वटा वडा गुमाएको छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह चुनावमा कुश्मा नगरपालिकाको मेयरमा काँग्रेसका रामचन्द्र जोशी नै निर्वाचित भएका थिए । उनले एमालेका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मेघनाथ सुवेदीलाई ८१८ मतले पराजित गरेका थिए । जोशीले ८ हजार ५७ मत ल्याएका थिए भने एमालेका सुवेदीले ७ हजार २३९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यस्तै, उपमेयरमा काँगे्रसकी सीता कुमारी काफ्ले निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले ८ हजार ४१९ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । काफ्लेले नेकपा एमालेकी मुवा कुमारी शर्मालाई १ हजार ३९६ मतले पराजित गरेकी थिइन् । शर्माले ७ हजार २३ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
यसअघि २०७४ सालमा भएको यो नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका पदमपाणी शर्मा ६ हजार १०३ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । उनले काँग्रेसका प्रतिद्वन्द्व अर्थात् हाल निर्वाचित गंगाधर तिवारीलाई ३४८ मतले पराजित गरेका थिए । तिवारीले ५ हजार ७५५ मत प्राप्त गरेका थिर्ए ।
यस्तै, नेकपा एमालेका मन्जु अधिकारी प्यासी उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले ५ हजार ९५४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेसकी रेखा गुरुङले ५ हजार ६४९ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा जलजला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका याम बहादुर मल्ल निर्वाचित भएका थिए । मल्लले नेकपा एमालेका लालबहादुर अधिकारीलाई ६४५ मतले पछि पार्दै जित निकालेका थिए । निर्वाचित मल्लले ३ हजार ७२३ मत प्राप्त गरेका थिए भने अधिकारीले ३ हजार ७८ मत ल्याएका थिए ।
यस्तै, उपाध्यक्षमा काँग्रेसकै सिमा गर्वुजा पुन निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले ३ हजार ७८३ मत प्राप्त गरेकी थिइ्न् । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एकालेकी अनिता कुमारी रेग्मी पौडेलले ३ हजार ६५७ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
२०७४ सालको चुनावमा पैयूं गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका खगेन्द्र प्रसाद तिवारी ३ हजार ४३१ मतका साथ निर्वाचित भएका थिए । तिवारीले नेकपा एमालेका मित्रलाल वस्याललाई ९ सय ७७ मतले जितेका थिए । वस्यालले २ हजार ४५४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यस्तै, उपाध्यक्षमा काँग्रेसकी जसमति गुरुङ निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले ३ हजार १६८ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । उनकी प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी गोमता कुमारी शर्माले २ हजार ४८४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा महाशिला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका राजु प्रसाद पौडेल २ हजार ४५३ मतका साथ निर्वाचित भएका थिए । सोही पदमा काँग्रेसका कृष्ण गुरुङले २ हजार १० मत प्राप्त गरेका थिए ।
सो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेकै हिरा कुमारी राना २ हजार ४८३ मत प्राप्त गरी निर्र्वाचित भएकी थिइन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी काँग्रेसकी सृजना मल्लले एक हजार ९१५ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
यसअघिको निर्वाचनमा मोदी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका प्रेम शर्मा पौडेल निर्वाचित भएका थिए । उनले ५ हजार ३४३ मत ल्याएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका विश्व प्रकाश प्रसाई ठकुरीले ३ हजार ८१९ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै उपाध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेकै सेती महत निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले ५ हजार ३९६ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
महतकी निकटतम प्रतिस्पर्धी काँग्रेसकी मीना कुमारी केसीले ३ हजार ८३४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
पाँच वर्षअघि भएको निर्वाचनमा विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्षमा नेकपा एमालेका कमल प्रसाद भुसाल निर्वाचित भएका थिए । उनले २ हजार ४२० मत प्राप्त गरेका थिए । उनी नेपाली काँग्रेसका परविन गुरुङलाई २०३ मतले पछि पार्दै निर्वाचित भएका थिए । गुरुङले २ हजार २१७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेकी डम्वर कुमारी गुरुङ निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले २ हजार ३१५ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । गुरुङले नेपाली काँग्रेसकी विष्णु कुमारी खड्का क्षेत्रीलाई १६ मतले पराजित गरेकी थिइन् । क्षेत्रीले २ हजार २९९ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
१० . महाशिला गाउँपालिका वडा नम्बर ६ फलामखानी
९.कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर ७ शिवालय
११.कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर ९ कटुवाचौपारी
१२.कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर १४ आर्थर
१३ .फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर १ कार्कीनेटा
१८.फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर १० कुर्घा
२२.मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ क्याङ